China Magnetic upfu akamedura gadzira uye Fekitori Kangpa
1. Hwakasiyana hwakawanda hwekutonga hunogona kuitwa zviri nyore.
2. Inogona kuwana inoenderera ichitsvedza mashandiro.
3. Stable torque inogona kuwanikwa.
4. Hapana tweet inzwi. Iyo tsvimbo-yekutsvedza chiitiko cheichiito pamusoro chichaitika munzira yekukwesana, asi hazvizoitika pano, uye panenge pasisina ruzha rwekubatanidza, saka mashandiro akanyarara.
5. Iko kupisa kupisa kwakakura. Nekuda kwekushandisa kwemagineti poda ine yakanakisa kupisa kuramba uye yakanaka kutonhora nzira, inogona kushandiswa nerunyararo rwepfungwa kunyangwe mukuomarara kuenderera kwekutsvedza kushanda.
6. Runyararo kuenderera uye kutyaira mamiriro anogona kuwanikwa. Sezvo coefficient of static friction inenge yakafanana neye coefficient of dynamic friction, hakuzovi nekudengenyeka kana kwakanyatsobatanidzwa, uye kuwedzera nekudzikisa kunogona kugadziriswa maererano nemutoro.
1. Yakakwira-chaiyo torque kudzora Iyo torque yekudzora renji yakafara kwazvo, uye iko kudzora kunyatso kukwirira. Iyo yekuparadzira torque uye inonakidza yazvino iri muchiyero chakaringana, icho chinogona kuona yakakwira-chaiyo kutonga.
2. Kugara kwakasimba uye hupenyu hwakareba, uchishandisa super alloy magineti poda ine yakanyanya kupisa kupisa, kupfeka kuramba, oxidation kuramba uye ngura kuramba, uye hupenyu hwakareba.
3.Kunakisisa kugadzikana kwekugara torque hunhu Magnetic upfu ine yakanaka magineti hunhu, uye simba rinosunga pakati pezvimedu rakadzikama, uye inotsvedza torque yakasimba kwazvo. Iyo haina hukama neyakaenzana nhamba yekumukira uye inogona kuchengetedza inogara torque kwenguva yakareba.
4. Inoenderera ichitsvedza mashandiro inoshandisa iyo inotonhorera chimiro ine yakanakisa kupisa kupisa kudzora uye yunifomu yekupisa deformation, pamwe neakawanda kupisa kupisa kwemagineti upfu, iyo inobvumidza yakakura kubatana uye braking simba uye inotsvedza simba, uye inogona kutsvedza zvakanaka pasina kukonzera vibration.
5. Kubatana kwakatsetseka, iko kukanganisika kudiki kwazvo kana pasina chaitika, uye kunogona kutanga nekumira mushe mushe. Uyezve, iyo torque yekudzivirira iri diki kwazvo uye haizokonzeresa kupisa kupisa.
6. Inokodzera kushanda kwepamusoro-frequency nekukurumidza kupindura uye yakakosha kupisa dissipation chimiro, inokodzera yeiyo yepamusoro-frequency oparesheni.
7. Kureruka, kusachengetedza-kusununguka, hupenyu-hwakareba, compact uye isina huremu, shandisa yakakwira-tembiricha inodzivirira makoiri uye akakosha magirizi mabhegi, uye shandisa akakosha ekurapa anodzivirira kurapwa kunhumbi inowanzo pfeka kuwedzera hupenyu hwebasa.
Nekuda kwemaitiro ari pamusoro apa emagineti eupfu mabhureki, ave achishandiswa zvakanyanya mukugadzira mapepa, kudhinda, mapurasitiki, rabha, machira, kudhinda uye kudhaya, waya netambo, simbi, uye zvimwe zvine chekuita nekumhanyisa maindasitiri ekugadzirisa uye ekumhanyisa makakatanwa. Uye zvakare, iyo magnetic powder clutch inogona zvakare kushandiswa kune buffer kutanga, kudzvinyirira dziviriro, kumhanyisa kumisikidza, nezvimwe.
Pashure: Puri inopisa inyauka inonamatira laminating muchina TH-101C
Zvadaro: Puri inopisa inyauka inonamatira laminating muchina TH-101B
Upfu batira akamedura
Pur Hot Melt guruu Nonwoven Laminating Machine, Pur Hot Melt Inonamatira Laminating Machine, Yakapisa Melt Glue Laminating Machine YeJasi, Kupisa Melt Glue Laminating Machine Ine Ce Chitupa, Kupisa Melt Glue Anonyorera, Otomatiki Inopisa Melt Glue Laminating Machine,